I-amazon echo 2nd-gen xa ithelekiswa ne-amazon echo ichaphaza: yeyiphi oyifunayo?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IAmazon Echo 2nd-gen xa ithelekiswa neAmazon Echo Dot: Yeyiphi oyifunayo?
IAmazon Echo 2nd-gen xa ithelekiswa neAmazon Echo Dot: Yeyiphi oyifunayo?
Ukuba wena & apos; kwintengiso yesithethi esichanekileyo ngoku, wena kunye neapos ngokuqinisekileyo unendlela ongakhetha kuyo kunabaxumi abanjengaleyo kunyaka ophelileyo. Isizathu soku silula: Iapile, uGoogle, kunye neenkampani ezininzi zobuchwephesha ezinkulu zingene kwimarike ngokutshiza okanye ziceba ukwenza njalo. Heck, nkqu nenkonzo yomculo ethandwayo yokusasaza i-Spotify inamahemuhemu amakhulu okuphuhlisa isithethi somculo esikwi-centric ngokwakho.
Nangona kunjalo, ukuba wena & apos uzimisele kakhulu ngokuzifumanela isithethi esikrelekrele, wena kunye neapos mhlawumbi uchithe ixesha elininzi lokuphanda iiAmazon kunye neeapos ezinikwe amandla yi-Alexa, kwaye kufanelekile njalo - indawo enkulu yentengiso inobukho obukhulu ebaleni. Izithethi ezimbini ezikrelekrele zeAmazon kunye neapos; ezibizwa ngokuba yi-Echo 2nd-gen kunye ne-Echo Spot, zezona zikhetha ukhetho.
Kuyavunywa, ezi zimbini okwangoku zezona zithethi ziingqondi ezijikeleze iAmazon & apos; umgca, ke iyavakala into yokuba thina & apos; sifuna ukukunceda wenze ingqondo yakho ngokuthelekisa ii-specs, iimpawu, kunye nexabiso lilonke lemali zombini IAmazon Echo 2nd-gen kunye neEcho Spot.
IAmazon Echo 2nd-gen
IAmazon Echo kunokwenzeka ukuba ibe ngumgqatswa ophambili kwisithethi esinobuchule bokuzalwa. Uhlobo lwesi-2 segajethi luyaphuculwa kwisandulela sayo ngeendlela ezininzi, ezizezi, ngokwenza umdlalo isithethi esitsha kraca, uyilo olutsha, kunye neqela lezitayile ezintsha ezipholileyo ezinje ngamalaphu kunye nezinto ezenziwe ngokhuni eziya kuvumela abathengi ukuba batshatise igajethi lilonke Uhlobo lwangaphakathi lwasekhaya. Sisipikha esikrelekrele esiqhelekileyo ngengqondo yokuba ijolise ekubeni yivenkile yakho yokumisa yonke into kuyo yonke imicimbi enxulumene nesithethi. Ngokufanelekileyo, eyona nto inomdla kwi-Echo sisithethi sayo esikhulu esenziwa ngeDolby esenza ukuba ibonakale phakathi kwezithethi ezikrelekrele zeAmazon.
IAmazon Echo Dot
I-Echo Do, kwelinye icala, iyafana kakhulu ne-Echo enkulu kodwa ijolise ikakhulu kwisithethi esilumkileyo kwamanye amagumbi apho isithethi se-Echo siphambili singenakufikelelwa khona. Yiyo loo nto, kwaye kukhuselekile ukuthi eyona njongo ye-Echo Dot kukwandisa nje i-Alexa kunye neapos kwindlu yakho, kodwa kunjalo, isenokusetyenziswa njengesithethi esizimeleyo esizimeleyo. Nangona kunjalo, ukuba kunjalo & apos, kunjalo, abathengi kufuneka balumke ukuba iDot isincinci kakhulu isidlali somculo njengoko kuziwa kwizixhobo ngokukodwa. Iswele isithethi esikhulu ngokuqhubekeka kweDolby yezwi elimnandi kunye neempendulo zebass ezinamandla ezisetyenziswa yiAmazon Echo kwaye ngenxa yoko ayiniki mdla xa kufikwa kumculo wokudlala.
Qiniseka ukuba i-Echo 2nd-gen kunye ne-Echo Dot isebenza malunga nayo nayiphi na i-smartphone okanye isixhobo esaziwayo sasekhaya onokufumana izandla kuso. Nasiphi na isixhobo esisebenza ngokukuko okanye inkonzo ye-IOT exabisa ityuwa ngokudityaniswa kwe-Alexa, kwaye nathi siyakucebisa ukuba uhlale kude nalawo angazenziyo. Nokuba ezinye iimoto ezintsha zisebenza kakuhle ne-Alexa, kodwa loo nto sisihloko sesinye isiqwenga.
Nge-2.5 'woofer kunye ne-0.6' tweeter, iAmazon Echo yenzelwe amava omculo kwaye sisithethi esihamba phambili kwiAmazon & apos's arsenal yesizathu. Kananjalo, inoluhlu olude lweempawu, oko kukuthi ulawulo olunomdla olubekwe phezulu, umgca-ngaphandle ngentambo ye-3.5 mm okanye iBluetooth, usasazo lomculo ngoncedo lweAmazon Music, Spotify, Pandora, njl. EMexico, naseKhanada, kwaye yintoni enokuchazwa njengesandi sokugcwalisa igumbi.
Isithethi se-munchkin smart sinesithethi esinye esingu-0.6 'esingazukugcwalisa igumbi lakho ngesandi kodwa siya kulunga ngokwazisa ngemozulu, iindaba, kwaye uphendule nawuphi na umbuzo onokuba nawo. Ngaphandle kwesayizi yesithethi, i-Echo Dot iyafana ne-Echo yesiqhelo ngokweempawu: isenolawulo olunomdla olubekwe phezulu kakhulu, ukuphuma ngaphandle ngentambo ye-3.5 mm okanye iBluetooth, umculo osasaza ngoncedo lweAmazon Music, Spotify , Pandora, njl, iifowuni zasimahla ezirekhodiweyo eziya e-US, Mexico, nase Canada, kunye ... nezo & apos malunga nayo.
Xa kuziwa kuyilo lulonke, kufuneka silinike i-Echo 2nd-gen, sisithethi esityebileyo sesibini, hayi kuphela kuba ivumela indlela yokwenza ngokwezifiso ngakumbi, kodwa nangenxa yokuba yenzelwe ukuba nebhongo iboniswe ekhayeni lakho. Amalaphu ahlukeneyo kunye neemeko zokugqibela ezenziwe ngomthi ezikhoyo ngokwahlukeneyo kukubheja okukhuselekileyo ukuba iAmazon Echo yakho entsha izakufumana indawo efanelekileyoekhayaakunamsebenzi kwisitayile sangaphakathi. Ngelixa ulawulo oluphezulu lwegajethi lubalasele, bebengayi kuba umboniso kwaye abasokuze bajonge ngokungathandekiyo endaweni nokuba usibeka phi isithethi esihlakaniphile.
Okwangoku, i-Echo Dot encinci incinci ikwanokukhetha kwayo iimeko zesiko ezikuvumela ukuba utshatise igajethi nezinto zakho zangaphakathi. Sitsho ukuba i-Echo Dot inesimbo esilixesha esiphila kulo kwaye siyabiwa kwaye ngenxa yoko aziqhayisi ngazinye izitayile ezenziwe ngokhuni, ezona zininzi 'zolondolozo' ezikhoyo ngenxa yokwahluka kwesikhumba.
Ngexesha lokubhala, i-Echo iya kwi- $ 84.99, kodwa ihlala ithengisa nge $ 99. Ngaba ufanele ukuyifumana le? Ewe kunjalo, kodwa kuphela ukuba awukwazi ukuhlala ngaphandle kweengoma ezinkulu njengoko ukuseta kwesithethi kwe-Echo yeyona ndawo iphambili yokuthengisa. Lonke olunye usetyenziso, yiya kwi-Echo Dot, efanayo ngokufanayo, kodwa enobulumko obunamandla obunamandla
Ungathenga iAmazon Echo 2nd-gen apha
IAmazon Echo Dot inokufumana i- $ 39.99 nje ngexesha lokubhala, kodwa ihlala ihamba nge- $ 49.99. Oko kufikeleleke ngakumbi kune-Echo yesiqhelo ngesizathu: ichaphaza nje alikhange libonakale xa kusenziwa ukusebenza komsindo, kwaye ukuba umculo udlala indima enkulu kubomi bakho bemihla ngemihla, kuya kufuneka uhambe neAmazon Echo kwaye uqwalasele kuphela isithethi esincinci esikrelekrele njengesongezo esecaleni kumava e-Alexa.
Ungayithenga iAmazon Echo Dot apha
Eyona meko iphambili ye-iphone 12 pro
isebenza kwi-bash shell script
Uphengululo lwe LG Stylo 6
U-Kanye uthi icwecwe lakhe elitsha, uBomi buka Pablo, alisokuze libe kwi-Apple Music okanye kwi-iTunes
Uhlaziya kangaphi kwifowuni entsha?
I-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus iza kwiMetroPCS, kodwa ubuncinci bukhona
Nazi iiapos zendlela yokufumana uGoogle & apos; umphathi wefayile omtsha we-Android, iiFayile Go